Ama-5 amaMandla amakhulu
Izilwanyana kunye Nendalo Imbali yoBomi emhlabeni
I-History of Mass Extinctions
I-codontosaurus idla izityalo kunye ne-volcano ngasemva. I-Getty / DEA IMITHETHO YEZIBRIBHILE
Kule minyaka engama-4.6 yezigidi zembali uMhlaba uye wajikeleza, kuye kwadlulelwa ezintlanu ezonakalisa ukutshabalalisa okuninzi okwasusa ubuninzi beentlobo zonke eziphilayo ngelo xesha. Iziganeko ezi zihlanu ezinzima zokuphela kweemitha ziquka i-Ordovician Mass Extinction, i-Devonian Mass Extinction, i-Permian Mass Extinction, i-Triassic-Jurassic Mass Extinction, kunye ne-Cretaceous-Tertiary (okanye i-KT). Zonke ezi ziganeko ezinkulu zokuphela kweendlala zihlukene ngobukhulu kunye nezimbangela, kodwa zonke ziphazamise ngokupheleleyo iintlobo zezinto eziphilayo ezifunyenwe kuMhlaba ngamaxesha ayenzekayo.
Ukuchaza ukuxothwa kweMisa
Ukugqithiswa kweMisitye yokubonisa ukuphumelela kwezinga apho iintlobo ezikhoyo ziphela, i-Field Museum. Getty / Charles Cook
Ngaphambi kokudlulela kule miba yezinto ezihlukeneyo ekupheleni kokubaluleka, kubalulekile ukuqonda into enokuthi ihlelwe njengesiganeko sokuphela kwesantya kunye nendlela ukuphela kweendlala ezimelela ngayo ukuvela kweentlobo ezenzekayo ukusinda ezi ntlekele. " Ukuqedwa kwamanzi " kunokuchazwa nje ngexesha apho ipesenteji enkulu yazo zonke iintlobo eziyaziwayo eziphila ngexesha liphela, okanye zisuswe ngokupheleleyo. Kukho izimbangela ezininzi zokupheliswa kwezinto ezininzi ezifana nokutshintsha kwemozulu , iintlekele ze-geological (njengezikhulu ezininzi zokuqhuma kwe-volcanic), okanye i-meteor ihlasele emhlabeni. Kukho ubungqina bokuba ukubonisa ukuba ii-microbes zithe zanyuka okanye zinegalelo kwezinye zokuqothulwa kweendlala ezaziwa kuzo zonke i-Geological Time Scale.
Ukuxhatshazwa kweMisa kunye noVukeleko
I-Water Bear (i-Tardigrades). I-Getty / iSayensi yeCandelo leSayensi
Ngoko iziganeko zokuphela komzimba ziye zenza njani ukuziphendukela kwemvelo? Ngokuqhelekileyo, emva kwesiganeko esikhulu sokuphela kwesithintelo, kukho ixesha elikhawulezayo lokuzikhethela phakathi kweentlobo ezimbalwa eziphila. Ekubeni iintlobo ezininzi zezilwanyana ziyafa ngexesha leziganeko ezinobungozi, kukho indawo eninzi kwiindawo eziphilayo eziza kusasazeka kunye nezinto ezininzi kwiimeko ezifuna ukuzaliswa. Njengabantu abahlukeneyo kwaye bahamba, bavumelanisa nokuhamba kwexesha kwiimeko ezitsha zendalo kwaye ekugqibeleni bayahlukana ngokuzenzekelayo kubantu basekuqaleni bezilwanyana. Ngelo xesha, banokuqwalaselwa njengezilwanyana ezintsha kunye neentlobo ngeentlobo zezinto eziphilayo ngokukhawuleza. Isantya sokuziphendukela kwemvelo sinyuke kakhulu ngenxa yazo zonke iindima kunye nezikhala ezifuna ukuzaliswa ngabantu abaphumelele ukusinda. Kukho ukhuphiswano oluncinci lokutya, izixhobo, indawo yokuhlala, kunye nabatshatileyo, ukuvumela iindidi "ezisele" ukususela ekugqibeleni ukugqithiswa komzimba kwaye zivelise ngokukhawuleza. Eninzi inzala kunye nezinye izizukulwana zithandwa ukunyuka kwezinga lokuziphendukela kwemvelo.
Ukuqothulwa kweMisa enkulu yokuqala - I-Ordovician Mass Extinction
I-TRILOBITE (ISOTELUS GIGAS). OLAWULO, OH. H. Getty / Schafer & Hill
Xa : Ixesha le-Ordovician ye- Paleozoic Era (malunga ne-440 yezigidi zeminyaka edlulileyo)
Ubukhulu bokuphela : Ukufika kuma-85% kuzo zonke iindidi eziphilayo ngexesha
Ibangelwa okanye Iingxaki ezixhaswayo : I-Continental Drift kunye nokutshintsha kwemozulu elandelayo
Isiganeko sokuphela kwesithintelo esenzeke ngexesha le-Ordovician Period ye-Paleozoic Era kwi-Geologic Time Scale yinto yokuqala yokuphela kokufa okukhulu. Ngelo xesha kwimbali yobomi eMhlabeni, ngokwenene, ubomi bebukho kumanyathelo ayo okuqala. Iifom zokuqala ezaziwayo zavela malunga ne-3.6 billion zeeminyaka edlulileyo. Ngethuba le-Ordovician Period, nangona kunjalo, iifom zokuphila zasemanzini amakhulu ziye zaba khona. Kwakhona kwakukho nezinye iintlobo zezilwanyana emhlabeni ngeli xesha. Isizathu esicinga ukuba sisuke ngenxa yokutshintshwa kwamazwekazi kunye noshintsho olunzulu lwemozulu. Kwenzeke kumaza ahlukeneyo amabini. Umtshangatshangiso wokuqala wawumngcipheko owawujikeleza umhlaba wonke. Amanqanaba olwandle ancitshiswa kwaye iintlobo ezininzi zehlabathi azikwazi ukulungelelanisa ngokukhawuleza ukuze zisinde kwiindawo ezinzima, ezibandayo. Kwakungekho zonke iindaba ezilungileyo, nangona kunjalo, xa iqhwa liphela. Kwaphela ngokukhawuleza kangangokuba amazinga olwandle avuka ngokukhawuleza ukuze agcine umoya okwaneleyo kuwo ukuze agcine iintlobo ezazisinda kwilungu lokuqala. Kwakhona, iintlobo zazincitshiswa ukuba zijonge ngaphambi kokuphela kwazo zazisusa ngokupheleleyo. Kwaye kwenyuka ukuya kwii-autotrophs ezimbalwa zamanzi ezazisinda ukuze zandise amazinga oksijini ukuze iintlobo ezintsha zitshintshe.
I-Second Mass Major Extinction - I-Devon Mass Extinction
I-Doryaspis, uhlobo olusenyakatho lweentlanzi ezingenagwele ezingapheliyo ezihlala elwandle ngexesha lePeriod Devoni. Izithombe ze-Getty / Corey Ford / Stocktrek
Xa : Ixesha le- Devoni ye-Paleozoic Era (malunga ne-375 yezigidi zeminyaka edlulileyo)
Ubukhulu bokuQhuqulwa : Phantse i-80% yazo zonke iindidi eziphilayo ngelo xesha zacinywa
Isisombululo okanye izizathu ezixhatshaziweyo : Ukungabikho kwe-oksijini elwandle, ukupholisa ngokukhawuleza kwamaqondo okushisa, mhlawumbi ukuqhuma kwe-volcanic kunye / okanye imeteor
Ukuphela kweyesibini ekugqibeleni kwimbali yobomi eMhlabeni kwenzeka ngexesha le-Devoni Ixesha le-Paleozoic Era. Esi siganeko esikhulu sokuphela kwesiganeko sabuya silandela isiganeko sangaphambili se-Ordovician Mass Extinction ngokukhawuleza. Njengoko ubomi boMhlaba baqala ukuhlawulela kwaye bahlume njengoko isimo sezulu sinozinzo kunye neentlobo ezixhomekeke kwiindawo ezitsha, malunga ne-80% yazo zonke iindidi eziphilayo, emanzini nasemhlabeni, zacinywa.
Kukho iingcamango ezininzi malunga nokuba kutheni ukuphela kwelokugqibela kwelo xesha kwenzeka ngelo xesha kwiMbali yeGeologic. Umtshangatshangiso wokuqala, owenzela umonakalo omkhulu kwimpilo yasemanzini, inokubangela ukuba kubangelwa ukuba kulungelelaniswe ngokukhawuleza komhlaba. Izityalo ezininzi zamanzi ziguqulelwe ukuba ziphile emhlabeni, zishiye ii-autotrophs ezincinci zokwenza i-oksijini kuyo yonke impilo yolwandle. Oku kwakhokelela ekubeni ubunzima befa elwandle. Ukuhamba ngokukhawuleza kwiindawo zezityalo kwaye kwaba nefuthe elikhulu kwi-carbon dioxide ekhoyo emoyeni. Ngokususa i-greenhouse gesi ngokukhawuleza, ukushisa kwehla. Iintlobo zasemhlabeni zinenkathazo yokulungelelanisa nale nguqulelo kwimozulu kwaye yaphela. Ingqungquthela yesibini imfihlelo. Kungenzeka ukuba kuquke ukukhuphuka kwemitha ye-volcanic kunye ne-meteor ehlabayo, kodwa isizathu esona sizathu sokusasaza okwesibini sisacatshangwa singaziwa.
I-Third Major Mass Extinction - Ukuphela kweMisa ePermian
I-Dimetrodon skeleton ukusuka kwixesha lePermian. Getty / Stephen Ste Krasemann
Xa : Ixesha lePermian ye-Paleozoic Era (malunga neminyaka eyi-250 yezigidi edlulileyo)
Ubukhulu bokuphela : Ukulinganiselwa kwe-96% yazo zonke iindidi eziphila kuMhlaba ngelo xesha
Ibangelwa okanye ibangelwa : Ukungazi - mhlawumbi i-asteroid, ukuqhuma kwe-volcanic, utshintsho lwemozulu, kunye ne-microbes.
Ukuphela kwentsimbiso enkulu yesithathu kwaba ngethuba lokugqibela le-Epalezoic Era ebizwa ngokuba yiPerimi Périod. Lo ngowona mkhulu kunabo bonke ukuphela kwezinto eziqhelekileyo eziqhekezayo kunye ne-96% yazo zonke iintlobo zehlabathi ezilahlekileyo. Akumangalisi ukuba le ntshukumo enkulu yabizwa ngokuba yi-"Great Dying". Kubonakala sengathi akukho nto iphephile kulo mcimbi omkhulu wokuphela. Ubomi be-Aquatic kunye nomhlaba wenziwa ngokufanayo ngokutsha ngokukhawuleza njengoko eso siganeko senzeke.
Kusengumngcipheko omkhulu kunokuba yintoni echasene nale micimbi enkulu yokuphela kwayo. Iingcamango ezininzi ziye zaphonswa ngezazinzulu ezifunda ngeli xesha lixesha leGeologic Time Scale. Abanye bakholelwa ukuba mhlawumbi kubekho uluhlu lweziganeko ezikhokelela kwiintlobo ezininzi zezinto eziphilayo. Kungenzeka kube ngumsebenzi omkhulu wokhuni lwe-volcanic ehlanganiswe neempembelelo ze-asteroid ezathumela i-methane ebulalayo kunye ne-basalt emoyeni nasemhlabeni wonke. Ezi zinokubangela ukwehla kwe-oksijeni eyaphazamise ubomi kwaye kwazisa utshintsho lwemozulu olukhawuleza. Uphando olutsha lujolise kwi-microbe ukusuka kwisiqendu saseArchaea esichuma xa i-methan ephakamileyo. Ezi ngqungquthela zinokuthi "zithathwe" kwaye zitshintshe ubomi phakathi kolwandle, ngokunjalo. Kungakhathaliseki ukuba yintoni imbangela, le nkulu enkulu yokupheliswa kwamatye aphelile i-Paleozoic Era kwaye yagqitywa kwi-Era Mesozoic.
Ukugqithiswa kweMisa enkulu yesine - I-Triassic-Jurassic Mass Extinction
I-Pseudopalatus fossil esuka kwixesha le-Triassic. IiNkonzo zeePaki zeSizwe
Xa : Ekupheleni kwexesha eli-Triassic le- Mesozoic Era (malunga neminyaka eyi-200 yezigidi edlulileyo)
Ubukhulu bokuQhuqulwa : Ngaphezu kwesigama sazo zonke iintlobo eziyaziwayo eziphila ngelo xesha
Isizathu esibangelwayo okanye iinjongo : Umsebenzi omkhulu wentsholongwane kunye nezikhukhula ze-basalt, utshintsho lwemozulu, nokuguqula i-pH namanqanaba olwandle olwandle.
Isiganeko sesine senkangala enkulu sokuphela kokusasazeka ngokwenene sasihlangene nemimangaliso emininzi yokuphela kwayo eyenzekayo kwiminyaka eyi-18 yokugqibela yexesha eli-Triassic ngexesha le-Mesozoic Era. Ngaphezulu kwesi sihlandlo eside, malunga nesiqingatha sazo zonke iintlobo ezaziwa kwiMhlaba ngelo xesha zabhubha. Izizathu zale nkunkuma emincinci zingabonakaliswa kwimisebenzi ye-volcanic kunye nezikhukhula ze-basalt kwinxalenye enkulu. Iigesi ezifakwe emkhatsini wee-volcano nazo zenze iimeko zokutshintshwa kwemozulu ezishintshile amanqanaba olwandle kwaye mhlawumbi namazinga e-pH elwandle.
Ukugqithiselwa kweMisa enkulu yesihlanu-I-KT Mass Extinction
Ukuqothulwa kwama-dinosaurs, ubugcisa. Getty / KARSTEN SCHNEIDER
Xa : Ekupheleni kwexesha le- Cretaceous ye-Mesozoic Era (malunga neminyaka eyi-65 yezigidi edlulileyo)
Ubukhulu bokuqothula : Phantse i-75% yazo zonke iintlobo eziyaziwayo eziphila ngelo xesha
Isizathu okanye Ubangelwa : I-asteroid enkulu okanye i-meteor
Ukuphela kwentloko yesine enkulu kunokwenzeka ukuba yinto eyaziwayo kakhulu yokuphela komzimba. I-Cretaceous-Tertiary Mass Extinction (okanye i-KT Extinction) yaba ngumda ohlula phakathi kwexesha lokugqibela le-Mesozoic Era, i-Cretaceous Period, kunye nexesha eliphakamileyo le-Cenozoic Era. Le nto, nangona ayinkulu kakhulu, iyona eyaziwayo kakhulu kuba kukuphela kokudityaniswa kwezidinosaurs. Nangona kunjalo, i-dinosaurs kuphela yaphela, nangona kunjalo, ukuya kwi-75% yazo zonke iintlobo eziphilayo eziphilayo zafa ngexesha lomcimbi omkhulu wokuphela. Kucatshulwe kakuhle ukuba imbangela yale ntshonkotha yeyona nto yimpembelelo enkulu ye-asteroid. Esi sikhulu sikhala siphezu komhlaba kwaye sathumela i-debris emoyeni, ngokuvelisa ukuvelisa "igalelo lebusika" eliguqule kakhulu isimo sezulu kwiMhlaba. Oososayensi bafunda iinqununu ezinkulu ezishiywe yi-asteroids kwaye ziyakwazi ukuzibuyisela kwakhona ngeli xesha.
Ukuqothulwa kweMisa enkulu yeSithandathu-Okwenzekayo ngoku?
INgonyama Abazingeli. Getty / A. Bayley-Worthington
Ngaba kunokwenzeka ukuba siphakathi kweyesithandathu esikhulu sokuphela kweendlala? Iingcali ezininzi zenzululwazi zikholelwa ukuba sinjalo. Zininzi iintlobo eziyaziwayo zilahlekile kuba abantu baye bavela. Ekubeni iziganeko zokuphela kwezinto ezidlulayo zingathatha izigidi zeminyaka, kunokwenzeka ukuba sishumayela isithandathu sesiganeko esikhulu sokuphela. Ngaba abantu baya kusinda? Oku kusayi kuzimiselwa.
I-Eras yexesha leGeologic Time Scale
I-Degree Degree yeReiki yeSilabhusi yeSigaba
Indlela yokwenza i-Bootleg Anime DVD okanye i-Blu-ray
Isingeniso kwiMibono ebhengezayo
I-Facebook Hoax: "Ndifuna ukuhlala ngxakile"
Unzima Kangakanani Uvavanyo lwe-HiSET High School Equivalency Test?
Iziphakamiso zokukhokela iNcwadi yokuThuthwa kweeNcwadi
Unamalungu amaninzi kwiNdlu yabameli?
UTimoti - Umhlobo wePostile uPawulos
Abaqeqeshi Ngezizwe ezininzi zeMidlalo
I-Callaway FT OptiForce Driver Review
Iingoma eziziwayo zaseBrazil
Ukuzivocavoca ekubuyiseni izivakalisi ezichazayo